Recovery File Seagate - kabsado Faylal ay ka Seagate External Hard Drive
I caawi! Xogta lumay Seagate disk adag!
Waxaan si qalad ah la tirtiro dhammaan faylasha jir on my Seagate drive dibadda adag ; Run ahaantii waxaan u baahan tahay inuu ka soo kabsado kuwa files, wax soo jeedin wanaagsan?
Qeybiye ugu weyn ee kaydinta digital adduunka, Seagate quduus inay sameeyaan gaari ku adag dibadda ah oo tayo sare leh oo awood u leh shirkadaha iyo dadka caadiga ah, iyo dad badan oo u dooran. Si kastaba ha ahaatee, ku Seagate milkiilayaasha drive adag dibadda ayaa sidoo kale ma ka hortagi kartid masiibo khasaaro xogta ay sabab u tahay sababaha loo yaqaan oo aan la garanayn.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada file Seagate
The files aad u malaynayso in ay ka lumay ay sabab u tahay la tirtiro ama formatting dhab ahaan weli meel aad disk. Maxaa yeelay, meesha bannaan ee files ku mashquulin waxaa kaliya sida "heli karo si isticmaalin" calaamadeeyay iyo files noqon aan la arki karin. Iyada oo xirfad leh soo kabashada Seagate xogta , waa mid aad u fudud si aad u hesho dib dhan. Marka tan uu aqrinayo, waxa aad samayn lahaydeen oo markii hore waxa ay joojinaysaa xogta cusub qortaa galay aad disk, ama xogta la lumay overwritten lahaa.
Si aad u qabtaan a Seagate kabashada drive adag , waxaan jeclaan lahaa in aad soo bandhigto Wondershare ka Data Recovery dadka isticmaala Windows, dadka isticmaala Mac, Wondershare Data Recovery for Mac (la heli karo Mavericks). Arrinta No files yihiin waayay weerarka virus, dhismaha, musuq-maasuq, tirtirka ama qaar ka mid ah sababaha kale, haddii aan jir ahaan burburay, barnaamijkan ayaa kaa caawin kara inay si dhakhso ah oo si ammaan ah iyaga oo dhan dib u soo ceshano.
Download Free version saxda ah ee soo kabashada xogta, rakibi iyo waxa maamula on your computer. Halkan aynu qaadan version Windows ee tallaabooyinka hoos ku faahfaahsan.
Markii barnaamijka bilaabay, waxa uu aado Wizard hab kabashada sida default, halkaas oo kaliya u baahan tahay in aad ka jawaabto laba su'aalaha fudud ee aad u fulisid kabashada file Seagate. Tan koowaad waa in ay doortaan nooca file in aad rabto in aad dib u soo ceshano ka wadid aad u adag ka. BTW, haddii aad doorato Standard Mode ah, waxaadna ku gaari kartaa natiijo isku mid ah ka soo kabsanaya by doorashada "lumay Recovery File". Laakiin waxaa lagu talinayaa in hab Wizard ah.
Tallaabada 2 Dooro qalabka saari dibadda
Ka dooro "qalabka saari Dibadda" sida disk il u soo kabashada xogta, oo ay sii wadaan in ay "Next".
Fiiro gaar ah: Marka bilowga iskaanka, hubi "Enable Deep Scan", kuwaas oo kaa caawin karaan inaad hesho file ka luntay dheeraad ah oo gabi ahaanba.
Tallaabada 3 xogta Kulanka Xiisaha Leh oo ka soo kabsado Seagate
Marka iskaanka u dhameystiray, oo dhan files recoverable ku qoran yihiin natiijada iskaanka ee noocyada faylka. Waxaad iyaga ku eegaan kartaa mid mid markaasna aad u hubiso kuwa aad rabto in aad soo kabsado.
1. Ka hor inta soo kabsaday, waxaad isticmaali kartaa "Filter" inaad raadiso magaca aad file muhiim ah ee si aad u ogaato haddii ay jiraan in badan oo files marsiiyey baxay. Waxaa kuu baajin karaa wakhti badan.
2. Marka mooyee, soo kabsaday files, xasuuso inaad iyaga ku badbaadin on your computer drive adag ama aalad kale oo dibadda saari karo, laakiin aan u adag drive Seagate meesha aad ku badiyay xogta, waayo, wax ka fiirsaneysa inay ammaan ah.
Video tutorial soo kabashada file Seagate
> Resource > Ladnaansho > Sida lagu Helo Back Faylal ay ka Seagate External Hard Drive